Ọdịnihu nke Mobile | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 6, 2014 Tọzdee, Febụwarị 6, 2014 Douglas Karr
Everybọchị ole na ole ọ bụla, mụ na nwa m nwanyị na-ese okwu banyere onye nwere ụdọ. Achọrọ m eriri m, ọ na-ahapụkwa ụdọ ya n'ụgbọ ala ya. Ọ bụrụ na anyị ntị bụ ma ala ka otu ọbula ụgwọ percentages… kpachara anya! Ekwentị anyị abụrụla akụkụ nke mmadụ anyị. Ọ bụ ihe jikọrọ anyị na ndị enyi anyị, onye na-edekọ ihe nchekwa dị ugbu a, enyi anyị nke na-echetara anyị ihe anyị ga-eme ọzọ, ọbụnakwa mkpu anyị na-eteta n'ụtụtụ. Mgbe ọ nwụrụ, ọ na-adị anyị ka anyị efuola n'ọzara. 🙂
Gịnị ga-eme n’ọdịnihu? N'uche m, desktọọpụ, laptọọpụ na ọbụna mbadamba ga-apụ n'anya anyị, anyị niile ga-enwe ekwentị anyị. Ka anyị na-anọdụ ala na-arụ ọrụ, anyị ga-amịpụta ekwentị anyị wee lelee ya na ihuenyo dị n'ihu anyị… dị ka Airplay na AppleTV na-arụ ọrụ ugbu a. Okwu nile gbasara wiring, cabling, synchronika, wdg ga agabiga, anyị niile ga-eji televishọn anyị, redio anyị, ụgbọ ala anyị na ihe ndị ọzọ niile site na ekwentị anyị. Mgbasa ozi na ụlọ ọrụ USB ga-apụ n'anya dị ka ngwaọrụ mkpanaka ga-abụ isi ihe nke njikọ anyị niile. Wallets ga-apụ n'anya dị ka njirimara anyị nwere ike ịnwale site na ngwaọrụ mkpanaka.
Olileanya, site ugbu a ruo mgbe ahụ anyị ga - achọpụta otu esi agbatị ndụ batrị na ngwaọrụ anyị, mee ka oge ịgba ụgwọ na / ma ọ bụ nnapụta nnabata ihe na - enweghị eriri… nke mere na mụ na nwa m nwanyị agaghị alụ ọgụ maka eriri chaja!
a infographic si atọ na-eme ka anyị hụperetụ banyere ọdịnihu dị nso nke ikuchi ekwentị!
Tags: 2014201520162017n'ọdịnihumbaMobile na Mbadamba ụrọuto mkpanakaọnụ ọgụgụ ekwentịAmụmasmartphoneụwa